လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စက်ရုံ - တရုတ်လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အဓိကကျသော ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။လျှပ်စစ်ယာဉ်များ.နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်တွင် မိတ်ဆက်ခဲ့သော ဒေလီရှိ EV မူဝါဒအသစ်သည် ဗဟိုအစိုးရ၏ FAME အစီအစဉ်အောက်ရှိ မြို့တော်အတွင်း လျှပ်စစ်မော်တော်ကားများ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် ငွေကြေးမက်လုံးများစွာကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။၎င်းတွင် ပုလင်းအဖုံးပါရှိပြီး Keyless entry နှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့ အင်္ဂါရပ်များ ပေးဆောင်သည်။Razor Dirt Rocket MX650 သည် ၎င်း၏ MX350 ပေါက်ဖော်များနှင့် အလွန်တူသော်လည်း အသက် 16 နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူများအတွက် အပိုဆုကြေးများ ပါဝင်သည်။အကောင်းဆုံး- အစပြုသူ-နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော အရည်အသွေးမြင့် ခေါက်စကူတာကို လိုချင်သော ငွေကြေးအသိဖြင့် ဝယ်ယူသူများအတွက် အကောင်းဆုံး။ဂေဟဗေဒအရ သာယာသည်။
လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များသည် စိတ်ကူးစိတ်သန်းတစ်ခုအဖြစ် စတင်ပေါ်ပေါက်လာချိန်မှစ၍ ကောင်းမွန်သောအကွာအဝေးသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ဘက်ထရီထုပ်ပိုးရှိဆဲလ်တစ်ခုစီကို ယေဘုယျအားဖြင့် 3.0 ဗို့ (0% အားသွင်း) မှ 4.2 ဗို့ (100% အားသွင်း) အထိ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည်သည် စီးနင်းသူ၏ အရွယ်အစား၊ မြေပြင်အနေအထားနှင့် အကူအညီအဆင့်အပေါ် မူတည်ပြီး အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း တစ်ပတ်ကြာ အဖွင့်အပိတ်အသုံးပြုပြီးနောက် တစ်ကြိမ်သာ ကုန်ကျခဲ့ရပါသည်။၎င်းသည် Schwalbe G-One Speed ​​Performance 700X50C တာယာများနှင့်အတူ တင်ပို့သည်။စိတ်ကြိုက် Niner ထိုင်ခုံက တော်တော်အဆင်ပြေတယ်၊Green Electric Scooter အဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်ခြေနင်းမပါဘဲ သင်္ဘောတက်သည်။ကျွန်တော် ဆန်းစစ်ဖူးတဲ့ အရာတွေထဲမှာ Niner က သမားရိုးကျ စက်ဘီးနဲ့ စီးရတာ အကောင်းဆုံးပါ။
လူကြီးများအတွက် အကောင်းဆုံး2ဘီးလျှပ်စစ်စကူတာ လက်ကား 10000w
ဟိtrotinette လျှပ်စစ်trotinette electrique ၏ညီငယ်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်သက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည်။ဤစကူတာဖြင့်၊ သင်သည် ဤအဆင့်ရှိ အခြားစကူတာများထက် ဖြတ်တောက်ထားသော အထွတ်အထိပ် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ထို့အပြင် အလေးချိန် ပေါင် 330 အထိ စီးနင်းသူများကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ခိုင်ခံ့စွာ တည်ဆောက်ထားသည်။
ထရိုတီနက်လျှပ်စစ်သည် ယခင်ကကဲ့သို့ အားကောင်းခြင်းမရှိသော်လည်း၊ ၎င်းသည် 15-degree slope ကို 150 ပေါင်မြင်းစီးသူနှင့်အတူ ကိုင်တွယ်ရန် လုံလောက်သောစွမ်းအားကိုပေးစွမ်းသည်။သင့်တော်သော အကွာအဝေး 25 မိုင်ရှိပြီး 0-15 MPH အရှိန် 4.5 စက္ကန့်အတွင်း ကောင်းမွန်သည်။ထို့ကြောင့် သင်သည် ၎င်းကို အရှိန်အပြည့်ဖြင့် အဆက်မပြတ် မတွန်းနေသရွေ့ နေ့စဥ်သွားလာရန် အလွန်ကောင်းမွန်သော အကွာအဝေးကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ပြီးတော့ သင်မြန်မြန်သွားချင်တဲ့အချိန်အတွက် သူတို့ရဲ့ အရန်စွမ်းအင်တွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ သင်ယုံကြည်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။
မော်တော်ဆိုင်ကယ် trotinette လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်စကူတာရောင်းရန်ပူပြင်းသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ ARK Invest မှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ Sam Korus က ဤသို့ဆိုသည်– “အကျိုးတူပမာဏ၊အရင်းရှင်လူတွေရဲ့ဘဝတွေကို ထောက်ပံ့နေတာဟာ လူတွေနားလည်ထားတာထက် အများကြီးပိုမြင့်နေတယ်”၎င်းတွင် Uber ပိုင် Lime ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများမှ မျှဝေအသုံးပြုသော ကိုယ်ပိုင်လျှပ်စစ်ကားများ၏ ကုန်ကျစရိတ်များ ပါဝင်သည်။ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် ကုမ္ပဏီများသည် ဝန်ထမ်းများအား အစုလိုက်အပြုံလိုက် အလုပ်ထုတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပြန်ရရန် တင်းမာနေပြီဖြစ်သော ကုမ္ပဏီများသည် “ယခင်က ကောင်းကင်ယံတန်ဖိုးများ… ပျက်လုနီးပါးဖြစ်သည်” ဟု တွေ့ရှိရသည်။ဤအရာသည် မျှဝေသုံးစကူတာများ၏အဆုံးလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့် ဝင်ငွေများ ကျဆင်းခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော အများသူငှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များကို အားကောင်းလာစေမည့် မြို့ကြီးများက မျှဝေထားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ထောက်ပံ့သင့်သည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူအများအပြားက စောဒကတက်ကြသည်။သို့သော်ယခုအချိန်တွင်၊ "ထိုစကူတာစီးခြင်းက သင့်အတွက်ပိုမိုကုန်ကျလိမ့်မည်" ဟု Washington Post ကရှင်းပြသည်။ဥပမာတစ်ခုတွင်၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီဒေသမှခရီးသည်တစ်ဦးသည် ယခင်က $2.80 ကျသင့်သည့်စီးနင်းခသည် $7 သို့တိုးလာသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။“အခုတော့ ဒါက စျေးကြီးလွန်းတဲ့အတွက် သွားလာရေးရွေးချယ်စရာလို့ မမြင်တော့ဘူး” ဟု အစိုးရ ကန်ထရိုက်တာက သတင်းစာကို ပြောသည်။"Uber ကားငှားတာထက် အီလက်ထရွန်းနစ်စကူတာလေး ငှားတာက ပိုစျေးကြီးတယ်။"
ဘက်ထရီကြီးသော လူကြီးများအတွက် အရည်အသွေးမြင့် 13 လက်မလျှပ်စစ်စကူတာ
JAMA Network Open တွင် သောကြာနေ့က ထုတ်ဝေခဲ့သည့် အဆိုပါလေ့လာမှုသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများကြားတွင် ဦးထုပ်ဆောင်းခြင်းကိုလည်း သတိပြုမိခဲ့သည်။၎င်းတို့ထဲမှ ၁၀ ဦး သို့မဟုတ် ၄ ရာခိုင်နှုန်းသာ ဦးထုပ်ဆောင်းထားကြသည်။
အဖွဲ့က သီးခြားစီ ကြည့်ရှုခဲ့သည်။လျှပ်စစ်စကူတာစီးနင်းသူများလွန်ခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလက လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ရှိ လူစည်ကားသော လမ်းဆုံများတွင်စုစုပေါင်း စကူတာစီးနင်းသူ ၁၉၃ ဦးကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။၎င်းတို့အနက် ၉၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် ဦးထုပ်မဆောင်းကြကြောင်း လေ့လာမှုအရ သိရသည်။
San Diego ၏ အရေးပေါ်ဆေးပညာဌာနမှ ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ MD Edward M. Castillo မှ “မြင်းစီးသူများ၊ ဦးထုပ်ဆောင်းထားသင့်သည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။လက်ရှိ လေ့လာမှုတွင် မပါဝင်သူ Castillo နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် လျှပ်စစ်စကူတာ ပျက်ကျမှုကြောင့် ၎င်း၏ ဆေးရုံတွင် ဒဏ်ရာ ၂၀၀ ကျော်ကို မှတ်တမ်းပြုထားသည်ဟု ဆိုသည်။
20kw 84V 13inch လျှပ်စစ်စကူတာ trotinette လျှပ်စစ်
ကျွန်ုပ်တို့၏စကူတာများကို အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြင့် စုစည်းထားပါသည်။မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်သူများ.ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘောင်များကို SAE (မော်တော်ကားအင်ဂျင်နီယာများအသင်း) မှ အသိအမှတ်ပြုထားပြီး မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသော ကာဗွန်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တက်ကြွသောဖိအားအောက်တွင် စမ်းသပ်သည်။ကိုယ်ထည်အား မော်တော်ဆိုင်ကယ်အဆင့် ပေါင်းစပ် ABS ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး UV ခံနိုင်ရည်ရှိသော သုတ်ဆေးနှင့် epoxy ခြစ်ရာများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကြည်လင်သော coat ဖြင့် အုပ်ထားသည်။ခလုတ်များ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ ကြိုးဆွဲကြိုး၊ မီးပလပ်ပေါက်များ၊ ဘရိတ်များ၊ တာယာများ၊ မီးလုံးများ၊ ကေဘယ်များ စသည်တို့အားလုံးကို DOT အသိအမှတ်ပြုထားပြီး မော်တော်ဆိုင်ကယ်အစိတ်အပိုင်းစက်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်ပါသည်။
ဖက်ရှင်ရှိုး Sunport 13 လက်မလျှပ်စစ်စကူတာ
၎င်းသည် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ axial flux motor ဖြစ်သည်-72V, 20kW9,100 RPM မော်တာသည် 420 Nm peak torque ကိုပေးဆောင်သော ပေါင်းစပ်ဂီယာဘောက်စ်ပါရှိသော ဤစက်ဘီးအား မည်သည့်သတ်မှတ်အမြန်နှုန်းတွင်မဆို “ဂီယာမပြောင်းလဲဘဲ” အရှိန်ဖြင့် အရှိန်မြှင့်ပေးနိုင်သည်။Axial flux လျှပ်စစ်မော်တာများတွင် ယနေ့ခေတ်ဈေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သော မည်သည့်လျှပ်စစ်ကားမောင်းမော်တာ၏ အမြင့်ဆုံးအသုံးပြုနိုင်သော ပါဝါနှင့် torque သိပ်သည်းဆများထဲမှ တစ်ခုရှိသည်။ထို့အတွက်ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဖြစ်နိုင်သမျှ အသေးငယ်ဆုံး ပက်ကေ့ခ်ျတွင် ပါဝါအများဆုံး ထုတ်ပေးနိုင်သည်။၎င်းတို့၏ မြင့်မားသော RPM သည် မော်တာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြဲထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် စတင်ချိန်တွင်ချက်ချင်း torque နှင့် ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုနှုန်းနည်းပါးသည်။
ပြင်ပအားကစားလျှပ်စစ်စကူတာ trotinette electrique အရွယ်ရောက်ပြီးသူ
ပါဝါအကြောင်း ပြောတဲ့အခါ အရှိန်ကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူး၊ torque ကို ဆိုလိုတာပါ။Torque သည် မော်တာမှ ထုတ်ပေးသော လှည့်ပတ်တွန်းအားဖြစ်ပြီး သင့်လျှပ်စစ်စကူတာ၏ ဘီးကို လှည့်ကာ သင့်ရှေ့သို့ တွန်းပို့ပေးသော အင်အားဖြစ်သည်။
ယနေ့ဈေးကွက်တွင် စွမ်းအားအရှိဆုံး မော်တာမှာ 15000 watts ဝန်းကျင်ဖြစ်သည် - ၎င်းသည် offroad scooting အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော်လည်း မြန်နှုန်းမြင့်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ထိန်းချုပ်ရန်အတော်လေးစိန်ခေါ်မှုရှိနိုင်သောကြောင့် အတွေ့အကြုံပိုရင့်သော စီးနင်းသူများအတွက် ၎င်းကိုပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
trottinette လျှပ်စစ်၊ patinete လျှပ်စစ်စကူတာ
“အီး-စကူတာများစံပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် တိုတောင်းသောအကွာအဝေးတွင် ၎င်းတို့သည် တစ်ဦးချင်းကားခရီးစဉ်ဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြသည်။ထို့ကြောင့် မြို့တော်၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွင် ၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုသည် အကျိုးရှိနိုင်ပြီး ယာဉ်အသွားအလာကို လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။သို့သော်လည်း လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့် စက်ဘီးစီးသူများနှင့် ပဋိပက္ခများ ပြင်းထန်လာသဖြင့် လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့် စက်ဘီးလမ်းများပေါ်တွင် ပုံပျက်ပန်းပျက် စွန့်ပစ်ထားသော စက်အရေအတွက်ကြောင့် စည်းကမ်းများနှင့် ၎င်းတို့၏နေရာကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန် အမှန်တကယ် လိုအပ်သည်” ဟု Artur Szymczyk မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ Lublin သည် မြို့တော်ရှိ e-scooters အတွက် ၎င်း၏ စည်းမျဉ်းများကို မိတ်ဆက်သောအခါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် Lublin ၏ လက်ထောက်မြို့တော်ဝန်၊
15000w စကူတာ eletrica 72v ခေါက်လျှပ်စစ်စကူတာ
မော်တာအမျိုးအစား- Brushed DC, 7500w/72v
မော်တာ အများဆုံး တင်ဆောင်ထားသော Amps:90A
ရုန်းအား : 12.1 (NM)
အများဆုံး Rpm: 2700+-7.5% (rpm)
Controller အမျိုးအစား- လေအေးပေးစက်၊ ရေစိုခံခြင်းမရှိ၊ ဘရိတ်ပိတ်၊ အားသွင်းပေါက်ပေါက်
ဘက်ထရီ- ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီ၊ 72V/70AH
အားသွင်းချိန်: 6-8 နာရီ
ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ- အဝင်-၁၀၀-၂၄၀VAC၊ ၅၀/၆၀Hz၊ 5A Max၊ အထွက်-ဒီစီ 84V၊ 5A
patinete လျှပ်စစ်၊ စျေးအသက်သာဆုံးလျှပ်စစ်စကူတာ 15000w
Stand Scooter Electric ၏ ရှင်းလင်းချက်
1. 10 နှစ်သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွေ့အကြုံရှိသောလျှပ်စစ်စက်ဘီး / စက်ဘီး / စကူတာ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့် အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုသည် သာလွန်သောအရည်အသွေးကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့် သေချာစေသည်။
3. အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း- အများအားဖြင့် စတော့ရှယ်ယာရှိပစ္စည်းများအတွက် 2-3 ရက်အတွင်း တင်ပို့နိုင်ပြီး အများအပြားမှာယူမှုအတွက် 1-2 ပတ်ကြာတတ်သည်။
4. လွယ်ကူသောဆက်သွယ်ရေးနှင့် လျင်မြန်သောတာဝန်ယူမှု၊ နွေးထွေးသော-ရောင်းချပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှု။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် 15000w ရောင်စုံလျှပ်စစ်စကူတာ
ပစ္စည်း- ကိုယ်ထည် အလူမီနီယမ် အလွိုင်းဖြင့် မြှင့်တင်ထားသည်။
တာယာ13 လက်မ off-road ဖုန်စုပ်တာယာ
မော်တာပါဝါ- 72V15000W (မော်တာတစ်ခုတည်း 15000W dual drive dual မော်တာ)
ဘက်ထရီ ကန့်သတ်ချက်များ- 72V 70Ah
ယာဉ်အလေးချိန် 200KG ခန့်
ခံနိုင်ရည်- 150 ကီလိုမီတာ
ဘရိတ်များ- ရှေ့နှင့်နောက် နှစ်ထပ်ဆီဒစ်ဘရိတ်များ + EBAS အီလက်ထရွန်းနစ်ဘရိတ်များ ရှေ့ရှော့ခ်စုပ်ယူမှု- ဟိုက်ဒရောလစ် fr ဖြင့် စက်ခေါင်းနှစ်ထပ် ပြိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ont shock absorption နောက်ရှော့- high-end damping hydraulic shock
ထိန်းချုပ်ကိရိယာ- Dual 72V100A ထိန်းချုပ်ကိရိယာ